UKUXELWA KWAMAHHALA KUZO ZONKE IZIMPAWU ZE-BUSHNELL
Imbali yophuhliso lwamashishini
Uhlobo lwaseMelika hose clamp
Uhlobo lwaseBritane hose clamp
Uhlobo lwaseJamani uhlobo lwe-hose clamp
iindaba zeshishini 2
Ukuphuhliswa kwe-e-commerce ye-Intanethi kuye kwenza ukuba iinkampani ezininzi ze-hose hoop zikhuphisane ukuze zibambe "uloliwe okhawulezayo" we-e-commerce, kwaye abenzi behiphukusi be-hose bame kwiimpembelelo zorhwebo nge-e-yorhwebo ngezibonelelo zabo ezizodwa, iinkampani ze-hose hoop kuphuhliswa amajelo e-Intanethi ngeli xesha, kuya kufuneka ukuqinisa ngokuqhubekayo ukwakhiwa kweendlela ngaphandle kweintanethi, ukuze umenzi ngamnye aqhubeke nokuphuhliswa kwamaxesha, ukuze amashishini akwazi ukuqhubela phambili.
Iibhampasi zentsimbi ezingenazintsimbi zenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, kwaye inkqubo yokuvelisa ilungile. Emva kokuba bemkile kumzi-mveliso, bajongwa ngetsheki ezingqongqo. Zikhuselekile kwaye zithembekile kwaye zinamandla okulwa nerusi kunye nokuqina okuqina kwaye zihlala ixesha elide. Imveliso inembonakalo entle, ukusebenza ngokulula, i-torque ephezulu simahla kunye ne-torque epheleleyo. Umphetho we-hose clamp ugudile kwaye awenzakalisi i-hose. Isikere sibushelelezi kwaye isitampu somphiko sinokuphinda sisetyenziswe. Ke ngoko, iitampu zentsimbi zentsimbi ezingenasici zisetyenziselwa ikakhulu ukunxibelelanisa imibhobho enzima kunye ethambileyo, kwaye zisetyenziswa kakhulu ekubonakalisweni kweoyile, isampum kunye neehoses zolwelo kwizixhobo ezahlukeneyo zoomatshini ezinjengeemoto, iitrektara, iinqanawa, iinjini ze ipetroli ipetroli, iinjini zedizili, izitshizi, kunye nolwakhiwo lwakhiwo Unxibelelwano lomjelo ophantsi komhlaba ohambisa amanzi amdaka, njl., lolokuqala kuzo zonke iintlobo zonxibelelwano lwehose.
Iindlela ezininzi zokufakelwa kwee-hamp closes
Indlela yokufaka echanekileyo: Intsimbi yehose mayifakelwe ngokwexabiso le-torque elicetyiswe ngumenzi.
Indlela yokufaka engalunganga
1. Nangona i-hamp clost inokujikwa ibe lixabiso elifanelekileyo le-torque, ukwandiswa okusebenzayo kusebenza phantsi koxinzelelo, okuya kubangela ukuba isitampu se-hose siwe emphethweni we-hose kwaye ekugqibeleni sibangele ukuvuza komphunga.
2. Nangona ithambeka lomhombiso linokujijiswa umzuzwana ofanelekileyo, ukwanda kombhobho kunye nokuqengqeleka kwendawo kuya kunyanzela isibambisi somqhoboshi ukuba sihambe, sibangela ukuba umbhobho uvuza.
3. Nangona ithambeka lomhombiso linokuqiniswa, ukwanda, ukuhanjiswa kunye nokushukumiseka kwendawo yengxolo kuya kubangela ukuba udonga lwe hose lubekwe phantsi kwemikhosi yokusika, kwaye oko kuyonakalisa namandla ehipo. Izibambiso zehose ziyaqhubeka nokushukuma kwaye ekugqibeleni zibangela ukuba umbhobho uvuza.
Ixesha lokuposa: Aprili-10-2020